Funda ukusebenzisa icebo lokucoca ulwelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
URuben mendez | | Tutorials
Vala isangqa ngaxeshanye kwaye usebenzise Ulungelelaniso lwePolar lokucoca ulwelo ukwenza i-panorama edolophini ngokupheleleyo. Icebo lokucoca ulungelelwaniso polar likuvumela ukuba usebenzise imifanekiso ngokwenza ukuba igobe okanye ijikeleze ngokwazo. Ukuba isetyenziswe kunye nefoto entsha evela kwikhamera, iya kwenza kwangoko inguqulelo yesiqhelo engabonakaliyo. Kodwa, ukuba ifakwe kwi-panorama yesiqhelo, isiphumo siya kuba sesona sithombe sihle kakhulu esiya kuthi sinike umbono wokuthathwa emoyeni ngekona ebanzi. Ewe, uthotho lweefoto luya kufuneka, ngokungathi uthatha i-panorama ye-360-degree. Emva koko siza kufunda indlela yokusebenzisa ukhetho lwe-Photoshop's Photoemerge ukudibanisa imifanekiso kwaye emva koko siya kusebenzisa isihluzo. Nangona singasebenzisa ifoto ebanzi, njengale siyisebenzisayo ngoku, ungazama ukusika umfanekiso kubungakanani besikwere. Ndiza kukushiya le mifanekiso mibini ukuze uzame kwaye uzame.
1 Ukudala ifolda
2 Vula iifayile kwi-Photoshop
3 Hlanganisa kwi-photomerge
4 Umfanekiso wesityalo
5 Ujikelezo lomfanekiso
6 Faka isicoci
7 Ukugqitywa kokugqibela
Inyathelo lethu lokuqala kukubeka yonke imifanekiso esiza kuyisebenzisa kwifolda. Ndiyazi ukuba kukho iikhamera ezithe ngqo ezivela kwikhamera esele zidala i-panoramic kufuneka usebenze kwesi sifundo, ukuba le yimeko yakho ungaya kwinqanaba Ubungakanani boxwebhu. Ukuba ayisiyongxaki yakho, yenza ifolda yakho kwaye uthumele zonke iifayile kuyo.
Vula iifayile kwi-Photoshop
Sivula i-Photoshop kwaye siye ku Ifayile> Ukuzenzekelayo> Ifotoemerge.
Ibhokisi yencoko yababini iya kuvela apho kufuneka songeze iifoto esizibeka kwifolda eyenziweyo ngaphambili. sinikela ku kuhlola kwaye sikhetha imifanekiso esifuna ukuyisebenzisa kwesi sifundo. Sinika Vula. Kukulungele ukuba iifoto zibaliwe ngokulandelelana ukuze zikhawuleze ukwenza ukwakhiwa.
Okwangoku sikhetha Ukwenziwa okuzenzekelayo ukuze i-photoshop ibe yiyo emisela indawo kunye nendlela yokusebenzisa ifoto nganye. Khumbula ukuba ibhokisi yokukhangela ihlolwe dibanisa imifanekiso emazantsi epaneli. Sinika kulungile. Inkqubo iya kuqala ukubala nokwenza iimaski ukuze udibanise zonke iifoto. Ingathatha imizuzu embalwa. Isiphumo kufuneka sijonge into enje. Ukuba unemiphetho engalinganiyo okanye engaphumeleliyo, sebenzisa i- Isixhobo sesityalo (ucinezela C), ukushiya umfanekiso ofana nale.
Umfanekiso nangona ulungile, ukufezekisa iziphumo ezinqwenelekayo kuya kufuneka siwunqumle, ukuze sibe noxande kwaye ke sifezekise ibhola. Ungazama ubungakanani obahlukeneyo kwaye ubone ukuba zeziphi iziphumo abakunika zona xa usebenzisa icebo lokucoca ulwelo.
Ngoku siya ku Umfanekiso> Ujikelezo lomfanekiso> 180º. Kuya kufuneka sifumane into enje.
Ngoku siyavula isihluzi> ukugqwetha> ulungelelwaniso lwepolar. Ukuhlala ngoluhlobo.
Kuya kufuneka siphinde sisebenzise umfanekiso kunye nesitampu sendawo, kanye apho iziphelo zomfanekiso zihlangana khona, ukuzifihla. Ndiwubuyisile umfanekiso kwakhona, kuba ukuba ngumthombo kuyawunika lo touch ukuba siyathanda kakhulu malunga nesi sihluzo.
Ndiyathemba ukuba uyithandile kwaye ungathandabuzi ukubhalisela ukufumana iindaba ngezihloko ezininzi ezinomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Funda ukusebenzisa ulungelelwaniso lwe polar